ILA TALI AQRISTE: “Ninkeyga laba arrinba waan ka goyn waayay” | shumis.net
Home » galmada » ILA TALI AQRISTE: “Ninkeyga laba arrinba waan ka goyn waayay”
ILA TALI AQRISTE: “Ninkeyga laba arrinba waan ka goyn waayay”
Fadlan si anshax iyo wanaag leh ula tali walaalkaaga ama walaashaada dhiban. Adigana haddii aad talo doon tahay noogu soo dir arrintaada . Sirhufan@hotmail.com Sirhufan.com mar walba inay bulshada caawiso, una sahasho isticmaalka bogga ayay ballan qaadeysa
Waxaan ahay inan Soomaaliyeed waxaan guursaday nin iga weyn. Markii aan baranayey waxaan ku arkay inuu yahay muqayil yacni sigaar iyo jaad ayuu isticmaalaa. Waa nin shaqaysta, maalintii ilaa 2:30pm wuxuu ku maqan yahay shaqo markuu guriga yimaado wuu qadeeyaa, isla markii uu qadeeyo wuxuu aadaa magaalada iyo jaad. Habeenkii wuxuu yimaadaa 10:30 pm markuu soo galo wuxuu qaataa computer-kiisa fadhiga ayuu fariistaa ilaa 02:00am midnight, markaas ayuu haddana laptopkiisa qaataa oo jiifka soo galaa oo seexdaa.
Sbaxdii markuu kaco shaqaduu aadaa, yacni sidaas ayaa uu noloshiisii ka dhigay, anigana ma is aragno habeenkii anoo hurduu tagaa, maalintii anoo shaqada ku maqan ayuu baxaa, dhowr jeer ayaan kale taliyey, waaniyey, labada family (qoys) micnaha reerkeyga iyo kiisa ayaan dhibkayga u sheegtay, mar kasta wuxuu dhahaa waan iska joojinayaa, haddana meeshiisa ayuu kaga miisaa.
Dhowr jeer “ifur” ayaan iri, wuu iga diiday. Noloshayda mugdigaas ayey ku jirtaa meesha ay asaagay ay farxada kaga jiraan. Fadlan idinkoo mahadsan ila soo taliya ma ka tagaa oo waraaqdayda maka qaataa mise …..idinkaan idinka warsugayaa….Saddex jeer ayaa labada famil ka wada fariisteen, markii la iga furi lahaa ayaa waxaa la iyiri fursad sii markii ugu danbaysay weeyay’e. Fursaddii hadii aan siiyey, ninkii wax is badal ahkamahayo waa sidiisii, Markaan hadii aan is dhahana familkii ku noqo oo usheeg inuusan ninkaan wax isbadal ah lahayn fursadii ugu danbaysayna wuu qaata. Mana ahan nin yar oo aad dhihi kartid yaraan baa ugeenaysa waa 40 sano jir iyo ka badan, ana waxaan jiraa 23sano. Marka walaal taladiina ayaan u baahanahay inaad igu caawisaan.
Mahadsanidin waa walaashiin Dhiban
Title: ILA TALI AQRISTE: “Ninkeyga laba arrinba waan ka goyn waayay”
Posted by Unknown, Published at March 26, 2017 and have 0 comments